Al-Shabaab Oo La Wareegay Deegaan Ku Yaalla Jubbada Hoose -News and information about Somalia
Home Warkii Al-Shabaab Oo La Wareegay Deegaan Ku Yaalla Jubbada Hoose
Al-Shabaab Oo La Wareegay Deegaan Ku Yaalla Jubbada Hoose
Wararka ka heleyno Degmada Dhoobleey ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in Dagaal u dhexeeyay Ciidanka maamulka Jubbaland iyo Al-shabaab uu ka dhacay deegaan duleedka ah degmadaas.
Dagaalkan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid kooban oo dhexmaray Ciidanka Jubbaland iyo Al-shabaab, waxaana uu sigaar ah ah uga dhacay deegaan lagu magacaabo Bed-alamo oo kaabiga ku haya xuduudka ay wadaagaan Somalia iyo Kenya.
Dagaalka kadib ayaa Al-shabaab waxaa ay la wareegeen deegaanka Bed-alamo oo markii hore ay ku sugnaayeen Ciianka Jubbaland, hayeeshee markii dambe ay isaga baxeen Saldhigyadii ay halkaas ku lahaayeen.
War qoraal ah oo lagu daabacay baraha Al-shabaab ayaa waxaa ay ku sheegeen inay la wareegeen gacan ku heynta deegaanka Bed-alamo oo hoostaga Dhoobleey.
Sidoo kale Al-shabaab ayaa sheegtay ay Saldhigii Ciidanka Jubbaland ee deegaanka ay ka qaateen saanado hub ah waa sida ay hadalka u dhigeen.
Dhinaca kale Weli ma jiro wax war ah oo ka baxay Sraaakiisha Ciidanka Maamulka Jubbaland oo ay uga hadlayaan wararka sheegaya in shabaab ay la wareegeen deegaanka Bed-alamo oo hoostaga Degmada Dhoobleey ee Gobolka Jubbada Hoose.
Previous articleXog: Farmaajo oo go’aan ka gaaray xilalka Mas’uuliyiintii lagu dilay QARAXII Gobolka Banaadir
Next articleWasiirka Warfaafinta oo Warbaahinta madaxda bannaan ku eedeeyay inay heshiis kula jiraan Alshabaab
XOG: Dalka ay ka timid lacagta uu Deni ku riday Dhoobo...
Ra’iisul Wasaare Kheyre Oo Ku Wajahan Magaalada Marka